တစ်ကယ်နှိပ်ခဲ့တဲ့ Portrait | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » တစ်ကယ်နှိပ်ခဲ့တဲ့ Portrait
Posted by Diamond Key on Feb 6, 2012 in Arts & Humanities, Photography | 26 comments
စိန်သော့ရဲ့ ရိုက်ချက် စိုင်
တစ်ကယ်တော့ စိန်သော့က လျှပ်တစ်ပြက် ဓါတ်ပုံတွေသာ ခလုပ်နှိပ်တာများပါတယ်။ ရိုက်စရာတွေ့တာနဲ့ ကင်မရာတန်းထုတ်၊ ဖြတ်ခနဲချိန်၊ ဂွတ်ခနဲ နှိပ်ရတဲ့ Pictorial ပုံတွေ၊ Record ပုံတွေကိုပဲ ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံထဲမှာ လူပုံတွေပါရင်လဲ ပြင်ပလောကမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ သဘာဝအခြေအနေတွေ အတိုင်း တွေ့တဲ့နေရာမှာ ဖြစ်နေတဲ့ အနေအထားတွေ အတိုင်းနှိပ်လိုက်တာပဲ များပါတယ်။ စိုင်ပစ်တာ မပိုင်ဘူးဗျ။ အဲ.. သူများတွေ စိုင်ပစ်ပြတော့ အားတော့ကျသားကလား။
တစ်နေ့ကတော့ အကြောင်းလေးတိုက်ဆိုင်လို့ စိုင်ပုံလေးတွေ နှိပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ရွာထဲမှာ စိန်သော့ကို စိုင်ပုံလေးရှိရင် ပြပါဆိုလို့တစ်ကယ်နှိပ်ခဲ့တဲ့ Portrait လေးတွေ ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Modelလေးက တက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံ ကာယအလှမယ် ပန်းမို့မို့မင်းခန့်တဲ့။
အားပေးအုံးမယ်ဆိုရင်တော့ http://www.facebook.com/KKDPC ကိုသာသွား Like ပါ။
အော် ကိုစိန်သော့ က
လူစည် ဦးတော့မှာ မြင်ယောင်သေး ဟေးဟေး။
ပစ်တတ်လို့ ပစ်တာမဟုတ်ပါ ………
ရိုက်ခိုင်းချင် သပဆိုလဲ ခိုင်းဗျာ ………………..
သဂျီး ကတော့ “ပဲပြုတ်နံပြားနှင့် လက်ဖက်ရည်တို့ သူငယ်ချင်းအုပ်စု” ပုံတော့တောင်းထားတယ် :eek:
ထည့် ရိုက်လို့ရအောင် စည်းနဲ့ ဝါးလေးပါယူခဲ့ ဒါပဲ..ဒါပဲ…ဒါပဲ
နှူးဘာဂီ ၀င် ရှလွတ် ..အဲ့ …အားပေးဘီ…။
ကျနော်သိချင်တာ က ..
ခရော့ပင် အယူအဆ လေး အကြောင်းပါဗျာ
နောက်နေတာလား ဆြာရယ်…. ဒါမိုးလေးတွေ မှာ ဆြာကဆြာလေ
အပိုင် “စိုင်” ပစ်နေတဲ့ ဆြာ့ကို မပိုင် “စိုင်” ပစ်နေတဲ့ နော်က “မီးကျောင်းမင်း ရေကင်းမပြရဲ” ပါကြောင်း……………. ပါကြောင်း……………..ပါကြောင်း
ခြေမျက်စိက ကောက်ကက် ပီး ခရော့ပ်လို့ ဆဲခံထိဖူးလို့ပါ…ဟီး…။
နောက်တခု လက်မောင်း …လက်မောင်းကို ထည့်ခရော့ပ်ရမလား ဖြတ်ချရမလား
လုံးဝ ကွဲပြားပြီး မသိပါဘူးဗျာ …
(စကားမစပ် လက်မောင်းလှတဲ့ မိန်းကလေးကလည်း ရှားသား …..)
ပြန်လာရင် ဆက်ဆက် …မန်းလေးတက်ခဲ့မယ်ဗျာ …ဒေသခံ စိုင်ရှာထားပေးပါနော…။
အဲ ………… အဲ ………….. အဲဒါ့ ပြောတာပေါ့ :razz:
လက်မောင်းလှတဲ့ မိန်းကလေးကလည်း ရှားသား ….. ဆိုတာ
နော် က စွတ်စက်သာ ပစ်နေတာ … ဘယ်လို လက်မောင်း ကလှတယ်ဆိုတာ…. တိဘူးဂျ
ဘယ်လို လက်မောင်း မျိုးလေးတွေက လှတယ်ဆိုတာလေး ကြိုပြောထားလေ … စိုင်ရှာရင် အဆင်ပြေအောင် … ဆြာကြိုက်လေး
ဒေသခံ စိုင်က တော့ ရှာစရာ မလိုတော့ဘူး။
ပေါက်ဖေါ်မ ရှိနေပြီ။ အဆင်သင့်ပဲ။ လာသာလာခဲ့တော့။
မီးလေးပေါက် … ပြင်ထားနော် …… အူးလေးဂီ လာမယ် :smile:
သူက မီးလေးကို ခြေမျက်စိက ကောက်ကက် ပီးလည်း ဖြတ်မယ်
ကျန်တာတွေလည်း မထင်ရင် မထင်သလို ဖြတ်မယ် ၊ တူက ပြောတဲ့ အတိုင်းလုပ်တာ … စိတ်ကြီးတယ် …
ပါတိတ်ဝမ်းဆက် ဆင်ကြည့်ဗျို့ …အဲ့ဒါ ဆိုပေါ်ပီ ..
(လက်မောင်းလှမလှ ပြောပါတယ် …အဟဲ …)
ဟိုဒေါက်တာဘွဲ့ဝယ်တဲ့ လူဂျီးရဲ့ ချွေးမတော် ဖစ်တွားတဲ့ …
စနေနာမ်မင်းသမီး ခေတ်ကောင်းစဉ်က ပုံလေးတွေ သွားမြင်ယောင်အိ…။
တက်တူးကြီးနဲ့ သများ ရေ ….လက်မောင်းလှအောင်
10Litre ရေပုလင်း ၂လုံး ဆွဲပီး လေ့ကျင့်နိုင်ပါကြောင်း….
Photo Album ထုတ်ပေးမယ် ဆိုရင် စိုင် ဖိတ် လို့ရတယ်နဲ့ တူတယ်နော့။ မန်းလေး ထိ ခေါ်သွားမယ် ဆိုရင်တော့ ….. ဘယ်သူတာဝန်ယူ မှာလဲ ဆိုတာ စဉ်စား ရတော့မှာပဲဗျို့  .။
ဆီမီး-ပရို စိုင်လောက်တော့ ပစ်ကြည့်ချင်သား ….
ကိုလုလင် ရေ…. လူစုပီး ရိုက်ကြ နှက်ကြတာပေါ့ …။
(ရန်ကုန်ဖြစ်ဖြစ် မန္တလေးမှာဖြစ်ဖြစ် နော…)
အသင်းမှ အဝေးရောက် အသင်းသားလေး…
ဧပြီ ပြန်လာမှာ မလား ….. ပစ် ကြတာ ပေါ့ဗျာ။
လေး ဖိုးကဒ် ဖြတ်
အပစ်ခံချင်တဲ့ စိုင် အဆင့်သင့်ရှိပြီးသွားကွ။
ဆင်ပစ် မြင်းပစ်တော့ ဇွတ်ခေါ်တယ်။
နော်က တစ်ရက်တောင် ကြိုပြောပြီးခေါ်တယ်လေ၊ ဒါပုံရိုက်ရှိတယ် ဆိုပြီး ……. အားဘူး ဆို ………. :mad:
စိတ်များ ညစ်ပါတယ် ……………..
ပုံလေးတွေ တွေ့မှ …… ဘာခုမှ ခေါ်ဘူးလဲ ………
ဒါဆို ……….. ခုကြိုပြောထားမယ်… လုဂီ တို့ရိုက်မယ် စိုင်လေးမစိန်ပေါက် အလှည့်ကျ လိုက်သွား ………… ဒါပဲ ဒါပဲ ဒါပဲ
ကန်းဒယ် ကန်းဒယ် (အဲလေ) ကောင်းဒယ်ကောင်းဒယ် ဒယ်အိုးကောင်းတယ် လို့ပြောတာ ဟုတ်ဘူးဗျိုး ဓတ်ပုံကောင်းတယ်လို့ပြောတာ(ရှိစုမဲ့စု သမာဓိတွေဒေါ့ ကျကုန်ပါပြီ )
အမွှေးကြီးက အရှည်ကြီးဘဲ ( ဆံပင်ပြောတာပါ )
လိပ်စာနဲ့ ဖုန်းနံပါတ်လေးမရှိဘူးလား ကိုကိုသော့
တယ်နိပ်တဲ့ မယ်ဆိတ် အဲလေ ၊ တက်ကသို ပေါင်းစုံ မယ် ပါ ကလား
“ပွင့်လင်းရာသီ” ရောက်ခါနီးပြီဗျို့။
ဒုတိယပုံရဲ့သစ်ပင်ကြီးနေရာမှသာ နေလိုက်ချင်တာ အဲဒီပို့စ် ကတစ်ခုခုကိုနှမျောနေသလိုဘဲ
ပေါ်က ပုံလေးကလဲ ကလု ဂလု အင်း………………………………………….
တောင်သမန်တံတားက တိုင်ကြီးတွေပါဗျ။ အဲဒီအောက်မှာ ကြာကြာနေရင် အပေါ်က လမ်းလျှောက်သူတွေကြောင့် ဖုန်တွေ ကျလာမယ်